Daruuraha dul hoganaya diyaaradaha Bariga Dhexe - BBC News Somali
Daruuraha dul hoganaya diyaaradaha Bariga Dhexe
13 Nofembar 2017
Image caption Carwada Duulimaadka Dubai
Saddexda shirkadood ee kala ah Qatar Airways, Emirates, iyo Etihad Airways ayaa waxa ay ahaayeen guulihii ugu waaweynaa ee dhanka duulimaadyada rayidka ah ay ka gaareen dalalkan Bariga Dhexe ku yaala ee Qatar iyo Imaaraadka.
Balse hadda wax kasta waa ay is badaleen, xaaladana aad ayay ugu xuntahay, waxaana dul hoganayo hoglo madmadoow.
Carwada duulimaadka hawada ee sanadkan ee Dubai oo bilaabanaya maalinka axadda ah ayaa qabanqaabiyeyaasha waxa ay balan qaadeen in ay lasoo shirtagi doonaan waxa ugu wanaagsan ee xagga duulimaadka rayidka ah, militariga iyo waliba cirbixiyeenimada. Bandhigaas oo ka wanaagsan kii la qabtay sanadkii 2015-kii.
Sacuudiga: Musuqmaasuq la dagaalanku waa billaw
Kutaan galay diyaaradda British Airways
Waa maxay sababta ay qaaliga u tahay diyaaradda madaxwaynaha Maraykanka?
Shilka diyaaradda ee garoonka Dubai
Image caption Guddoomiyaha Emirates Axmed Bin Saciid Al Makhtuum oo guddoomaya diyaaraddii 100aad ee ah nooca Airbus A380.
Balse labadii sano ee lasoo dhaafay wax badan ayaa is badalay gaar ahaan xagga dhaqaalaha, amniga iyo waliba siyaasadda.
Waxaa xaaladda ugu sii daray muranka siyaasadeed ee u dhaxeeya xulufada Sucuudiga iyo dalka Qatar.
Iyo sidoo kale tartanka adag ee ka imanaya diyaaradaha raqiiska ah ee suuqa ku jira, kuwaas oo leexsanaya qaar badan oo ka mid ah macaamiishii diyaaradahan waaweyn.
Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda IATA ee diyaaradaha, shirkadahan waxa ay sanadkii lasoo dhaafay faa'iideen $400 milyan oo doolar, waana hoos u dhac weyn marka la barbar dhigo sanadkii ka horeeyay oo faa'iidadu ahayd $1.1 bilyan oo doolar.
Image caption Shirkadda Etihad ayaa sanadkii hore gashay qasaare dhan $1.9bn
"Lixdii bilood ee ugu horeysay ee sanadkan xaaladda ganacsi aad ayay ugu cakirnayd, waxaana jiray in saxmad badan ay hawada ka jirtay, iyo canshuuraadka oo sare usii kacayay" ayaa lagu yiri warbixinta IATA.
Meelaha hoos u dhaca weyn laga dareemay waxaa ka mid ah dhanka diyaaradaha xamuulka oo mar ahaan jiray meel macaash badan laga helo.
Shirkadda Itihad ayaa ugu daran qasaaraha soo gaaray, waxaa la sheegay in
sanadkii lasoo dhaafay oo kaliya ay qasaartay $1.9 bilyan.
Diyaaradan ayaa ku qasbanaatay in ay saamiyo ka iibsato shirkado kale sida Virgin Australia, Air Serbia, iyo Jet Airways.
Shirkadaha raqiis ah sida Indigo ee Hidiya laga leeyahay , tan Singapore laga leeyahay ee Scoot iyo Norwegian Air ayaa suuqa ugu ciriiriyay diyaaradahan waaweyn.
Tusaale ahaan shirkadda Norwegian Air ayaa duulimaadka Amsterdam illaa Dubai ku bixinaysay qiimo kala bar ah kan ay Emirates ku bixiso.
Inkasta oo shirkadahan waaweyn ee Bariga Dhexe ay soo kordhiyeen adeegyo tayo leh oo raaxo leh, haddane kobaca waxa uu u wareegayaa dhanka shirkadaha yaryar ee raqiiska ah.
Image caption Shirkadda FlyDubai ayaa ka mid ah kuwa yaryar ee qiimaha jaban
Sidaas darteed shirkadda Emarates ayaa heshiis la gashay shirkadda yar ee FlyDubai si ay uga soo kabsato qasaaraha gaaraya.
Carwada duulimaadka Dubai ee hadda la qabanayo ayaa markii la bilaabayay sanadkii 1989-kii waxaa ka qeybgalay 20 diyaaradood iyo 200 qof, balse todobaadkan waxaa ka qeybqaadanaya 160 diyaaradood, iyo 72 kun qof. Dadkaas qaar ka mid ah waxa ay ka yimaadeen Ruushka iyo Shiinaha oo aad u danaynaya suuqyada Bariga Dhexe.
Shirkadda Qatar Airways ayaa la sheegay in ay tahay tan ugu xaalad wanaagsan saddexda shirkadood , waxayna faa'iiday boqolkiiba $22 , waxa ay sidoo kale maalgashi ku samaysay shirkadda British Airways iyo tan Latin America ee Latam Airlines.
Image caption Maareeyaha guud ee Qatar Airways Akbar Al Bakar
Balse tan iyo intii go'doominta lagu soo rogay dalka Qatar , xiligaas oo wixii ka dambeeyay shirkadda ay soo gaartay qasaare baaxad leh.
Qasaarahan waxaa ka faa'iidaystay shirkadaha Maraykanka oo muddo dheer ka caban jiray kororka shirkadahan.
Sidaas oo ay tahay waxaa la saadaalinayaa in shirkadahani ay kasoo kaban doonaan dhibaatada badan ee gaartay, balse ay soo kabashada qaadan doonto muddo dheer.
Waxaana taas loo sababaynayaa taageerada dowladaha ay ka helaan, iyo in aysan jirin ururo shaqaale oo curyaamin kara.